787-800 फेला पार्न सकिएन
प्रश्न 787-800 फेला पार्न सकिएन
8 महिना3दिन पहिले #1160 by Schachow
मैले आफ्नो P787D मा Alejandro Rojas 'टीडीएसएस 800-3 डाउनलोड र स्थापित गरें तर यो गाडी र SimObjects / Airplanes मा प्रदर्शित छैन।
के मैले केहि सम्झना गरें?
कुनै पनि सहयोग स्वागत हुनेछ।
8 महिना3दिन पहिले #1161 by rikoooo
तपाईंले सम्भवतया सही बाटो छोड्नुभएको छ। कृपया फेरि स्थापना गर्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाईंको P3D फोल्डरमा जान्छ। Prepar3D को को कुन संस्करण हो?
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.339 सेकेन्ड